မျိုးဥအိမ်အကျိတ်များရောဂါ (Polycystic Ovarian Syndrome- PCOS) – Healthy Life Journal
မျိုးဥအိမ်အကျိတ်များရောဂါ (Polycystic Ovarian Syndrome- PCOS)
By Dr. Tint Swe
၁။ ဆရာရှင့် . .သမီးရိုသေစွာစာရေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးမို့ အဟြေအဆိုရိုင်းသလိုဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ သမီးအခု အသက် ၂၆နှစ်ရှိပါပြီ။ အပျိုဖော်ဝင်စမှစပြီး ရာသီလာတာအကြိမ်ရေတောင် ရေတွက်မယ်ဆို ရေတွက်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခါမှလည်း ပုံမှန်မလာပါဘူး။ အခုနောက်ဆုံးအကြိမ်လာပြီးတဲ့နောက် မလာတာ ခြောက်လမကတော့ပါဘူး။ OG နဲ့ ပြပေမယ့် မထူးခြားပါဘူး။ အသက် ၂၀လောက်က ပြတုန်းကတော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးလိုမျိုးနဲ့ သံဓာတ်အားဆေး တွဲတိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတားဆေးတွေက သမီးနဲ့မတည့်လို့လားတော့မသိဘူး၊ အန်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်တာနဲ့ ဆက်မပြဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ၂၃ နှစ်လောက်မှာတစ်ခါပြဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ EPO ပဲတိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှကိုမမှန်ခဲ့ပါဘူး။ Ultrasound ရိုက်တော့လည်း ရေအိတ်နဲ့ အလုံးသေးသေးတွေရှိတယ်လို့တော့ ဟြေပါတယ်။
ရာသီလာမယ့် လက္ခဏာတော့ နှစ်လကို တစ်ခါလောက်တော့ပြပါတယ်။ ရင်သားနာတာနဲ့ ခါးဆစ်တွေကိုက်တာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ရောက်လောက်နေရင်တော့ အဖြူတွေအများကြီးလာပြီး ရာသီမလာတော့ပါဘူး။ တစ်ခါတလေတော့ သွေးရည်အကြည်တွေလာပြီး ပြီးသွားတယ်။ တစ်ခါတလေ တကယ်လာရင်တော့ အများကြီးလာတတ်ပါတယ်။ သွေးဖိအားကလည်း အမြဲပုံမှန်ပါပဲ။ အဲဒါအခု သမီးအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ ကုသနည်းလေးများရှိရင် ဟြေပြပေးပါနော်။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သမီးရဲ့ကျန်းမာရေးက တခြားဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ ကလေးရော ရနိုင်ပါဦးမလား။
၂။ ဆရာရှင့် . . ကျွန်မအသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ ရန်ကုန်၊့့့မြို ့နယ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၄နှစ်ရှိပါပြီ။ မည်သည့်တားဆေးမှ မသောက်သုံးပါ။ ကလေးလည်း မရရှိသေးပါ။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကတည်းက ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကို လစဉ်ခံစားရပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ နာကျင်ကိုက်ခဲတာက ရံဖန်ရံခါပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ လစဉ်ပုံမှန်လာပြီး သွေးဆင်းများပါတယ်။ ရက်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ စောလိုက်နောက်ကျလိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး အသက် ၂၆ နှစ်မှာ မိန်းမကိုယ်ယားယံပြီး အဖြူဖတ်ဆင်းတာနဲ့ အနံဆိုးထွက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ဖူးပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်မှာ ဒီရောဂါထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပြန်တဲ့အတွက် အသားစစစ်ဆေးခြင်း၊ သားအိမ်အတွင်းအပြင် Ultrasound ရိုက်စစ်ဆေးရာ ဘာရောဂါမှတွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၂ လအကြာ ရာသီလာချိန်မှာ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း မခံမရပ်နိုင်နာကျင်ခြင်းကို ခံစားလာရပါသည်။ အတွင်းခံကိုပင်မဝတ်နိုင်၊ အလုပ်ပျက်၍ လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်ပင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁ နှစ်ကျော်ခန့်ကြာအောင် ၎င်းဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ချိန်မှာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုတစ်နေ့ကို ၃ကြိမ်၊ ၃ ရက်သောက်ရာ သက်သာသော်လည်း နောက်ပိုင်းမသက်သာတော့တဲ့အတွက် ဆေးရုံမှာထပ်မံ၍ သားအိမ်အတွင်းအပြင် Ultrasound ရိုက်စစ်ဆေးရာ သားအိမ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အရည်အိတ်သေးသေးလေးတွေ တွေ့ရှိတယ်၊ ကလေးရဖို့လည်း ခက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီရောဂါကို ဘယ်လိုကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလဲ၊ ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသလဲ၊ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုအပ်ပါသလား သိလိုပါတယ်ဆရာရှင်။ ကလေးမရမှာလည်း စိုးရိမ်ပါသည်။
၃။ ဆရာရှင့်. .သမီး ရိုသေစွာစာရေးလိုက်ပါတယ်။ သမီးဖြစ်နေတာ PCOS ရောဂါပါရှင်။ အခုလောလောဆယ် metformin 500mg ကို တစ်ရက် ၂လုံးသောက်နေပါတယ်။ သမီးရာသီလည်းမလာပါ။ သမီးသိချင်တာက သားသမီးရနိုင်၊ မရနိုင်ကိုပါရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့်. . သားဥအိမ်ထဲမှာရှိသော cyst ခေါ် အရည်အိတ်ကလေးတွေ (Polycystic ovary syndrome) အကြောင်း သိချင်လို့ပါဆရာ။ သား၊ သမီး ယူတဲ့အချိန်မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်လား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာရော သန္ဓေသားကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာ။
၅။ သမီးအသက်က အခု ၂၇ နှစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ ၄၈ ကီလိုလောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်စ ၁၅နှစ်လောက်ကတည်းက ရာသီသွေးမမှန်တတ်ပါ။ အခုထိ တစ်ခါတလေ ၂လ- ၃လ ခြားပါတယ်။ ကြာချိန် ၃ရက်လောက်ပဲရှိတတ်ပြီး၊ အရမ်းဗိုက်နာတာတော့ မရှိသလောက်ပါ။ အသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကတော့ ၆လအထိ ထိန်ဖူးပြီး၊ နုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေးလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ အမွေး(ခြေသလုံးမွေး၊ ချိုင်းမွေး)လည်း နည်းနည်းကြမ်းသလို၊ Areola နို့အရောင်ရင့် အဝိုင်းပတ်ပတ်လည်မှာလည်း အမွေးလေးတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ရှည်ပါတယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းသတ္တိကဲတာပါလားရှင်။ အဲ့လိုတွေရှိလို့ ကလေးမရမှာ အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။ ၆လလောက်နေရင် ကလေးယူချင်လို့ ဘယ်လိုတားဆေးက အဆင်ပြေမလဲ။ သုံးလခံထိုးဆေးဆိုရင်လည်း ကလေးပြန်ရဖို့ကြာမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
PCOS ရောဂါဆိုတာ အမျိုးသမီးမီးယပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး ၅-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးမရဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာက ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကစတယ်။ ရာသီမမှန်တာ၊ ရာသီမလာတာ၊ ဝက်ခြံထွက်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များတာ၊ အမွေးပေါက်များတာ၊ လူအဝလွန်လာတာ၊ ဆီးချို-သွေးတိုး-နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဖြေ. အမေးများလို့ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များနေတာသိရပါတယ်။ ဆောရီး။ PCOS ရောဂါဆိုတာ အမျိုးသမီး မီးယပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး ၅-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးမရဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းတရားလည်း ဖစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာက ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကစတယ်။ ရာသီမမှန်တာ၊ ရာသီမလာတာ၊ ဝက်ခြံထွက်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များတာ၊ အမွေးပေါက်များတာ၊ လူအဝလွန်လာတာ၊ ဆီးချို-သွေးတိုး-နှလုံး ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဆေးကုသမှု သေသေချာချာလုပ်ရင် အများကြီးသက်သာစေတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုချင်းကိုကုသရတယ်။ PCOS ရောဂါကို Stein-Leventhal syndrome လို့လည်းခေါ်တယ်။ မျိုးဥအိမ်တွေမှာ အကျိတ်လေးတွေ အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။
တစ်ခါတလေမသိနိုင်ဘူး။ မျိုးရိုးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့ဒီရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဦးနှောက်ထဲက Pituitary gland ကနေထုတ်ပေးတဲ့ LH ဟော်မုန်းလည်း များနေတာတွေ့ရသေးတယ်။
ဒီရောဂါရဲ့ ပင်မလက္ခဏာကတော့ –
(၁) ရာသီမမှန်တာ (Menstrual distrubances)နဲ့
(၂) ကျား-ဟော်မုန်း (Androgens) များနေတာ နှစ်ခုဖြစ်တယ်။
၁. မွေးကတည်းက ရာသီတစ်ခါမှမလာတာ (Primary amenorrhea)၊
၂. ရာသီအလာနည်းတာ (Oligomenorrhea)၊
၃. ရာသီထိန်တာ (Secondary amenorrhea)၊
၄. ရာသီလာပေမယ့် မျိုးဥမထွက်တာ (Anovulatory cycles) နဲ့
၅. သွေးအများကြီးဆင်းတာ (Heavy bleeding) ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျား-ဟော်မုန်းများနေလို့ ဖြစ်လာမယ့်လက္ခဏာကတော့ –
၁. ဝက်ခြံ (Acne) ပေါက်တာ၊
၂. အမွှေးပေါက်များတာ (Hirsutism)၊
၃. ယောကျာ်းတွေလို ဆံပင်ကျွတ်တာ (ထိပ်ပြောင်တာ) (Male-pattern hair loss) တွေဖြစ်တယ်။
တခြား လက္ခဏာကတော့ –
– ကိုယ်အလေးချိန်-လူဝမယ် (Obesity and weight gain)၊
– ဆီးချိုထိန်းတဲ့ (အင်ဆူလင်) ဟော်မုန်းများနေမယ် (Elevated insulin levels and insulin resistance)၊
– အရေပြား အဆီပြန်မယ် (Oily skin)၊
– ခေါင်းမှာ ဗောက်ပေါက်မယ် (Dandruff)၊
– ကလေးမရဖြစ်မယ် (Infertility)၊
– အရေပြား အရောင်ပြောင်းတာ (Skin discolorations) တချို့နေရာတွေမှာဖြစ်မယ်၊
– ကိုလက်စထောများနေမယ် (High Cholesterol Levels)၊
– သွေးဖိအားများနေမယ် (Elevated blood pressure)၊
– မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်တွေ ဖြစ်နေတာတွေဖြစ်တယ် (Multiple, small cysts in the ovaries)၊
ရောဂါလက္ခဏာတွေကသာ ရောဂါနာမည်တပ်တာနဲ့ ကုသတာအတွက် အရေးကြီးတယ်။
မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ တွေ့တာနဲ့တော့ ရောဂါမဟုတ်သေးဘူး။ ရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ်ကို ရောဂါလက္ခဏာတွေကြည့်ရမယ်။ Androgen ကျား-ဟော်မုန်း (အင်ဒရိုဂျင်) စစ်ရတယ်။ DHEA နဲ့ Testosterone တွေ ကဲနေတတ်တယ်။ ကျား-ဟော်မုန်း(တက်စတိုစတီရုံး)များနေတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ PCOS ရောဂါလို့မပြောပါ။ Hypothyroidism လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းနည်းတာ စစ်ရတယ်။ Prolactin ခေါ်တဲ့ နို့ထွက်ဟော်မုန်း စစ်ရတယ်။
မျိုးဥအိမ် Ovary နဲ့ Adrenal glands ကျောက်ကပ်အထက်က (အဒြီနယ်လ်) အိတ်တွေမှာ အလုံး (Tumor) ဖြစ်နေသလား စစ်ရတယ်။ Ultrasound ရိုက်ရင် Ovary မျိုးဥအိမ်မှာ အရည်အောင်းနေတဲ့ Cysts အိတ်လေးတွေတွေ့မယ်။ CT scan နဲ့ MRI တွေရိုက်ရင်လည်းတွေ့မယ်။ CT scans ရိုက်တာက X-rays နဲ့ Dyes သုံးရလို့ လူတိုင်းကိုမလုပ်ပါ။
PCOS ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ –
အမျိုးသမီးအသက်ကို ကြည့်ကုရတယ်။ ငယ်သူတွေကို ကိုယ်ဝန်တားဆေးပေးနိုင်တယ်။ ရာသီမှန်စေမယ်၊ သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေမယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Progesterone ဟော်မုန်းကို ပေးလိုက်-ရပ်လိုက် လုပ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကိုတော့ တားပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝက်ခြံပေါက်နေသူ၊ အမွေးများနေသူတွေကို ဆီးသွားဆေး Spironolactone (Aldactone) ပေးနိုင်တယ်။ သူတို့ကို ဒီဆေးပေးရင် ပိုတက်ဆီယမ် စစ်နေရမယ်၊ Kidney function ကျောက်ကပ် စစ်နေရမယ်။ မျက်နှာအမွေးပေါက်သူတွေက Eflornithine (Vaniqa) (ခရင်မ်) လိမ်းရတယ်။
ကလေးရချင်သူတွေဆိုရင် Clomiphene (Clomid) ဆေးပေးရင် မျိုးဥထွက်စေနိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင် Gonadotropin ဟော်မုန်းပေးမယ်။ တခြားကလေးရစေနည်းတွေသုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ချရမယ်။ အမျိုးအစား(၂)ဆီးချိုရှိနေရင် Metformin (Glucophage) ဆေးပေးမယ်။ ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုရင် Ovarian drilling နည်းလုပ်ရမယ်။
ဆေးကျောင်းမှာ ရောဂါဗေဒသင်ရတုန်းက လူတွေမှာဖြစ်တဲ့ရောဂါဘယတွေက အလွန်များတယ်။ ကူးစက်နိုင်တာတွေကလည်း ပေါလွန်းလှတယ်။ အဲဒီအထဲက ရောဂါမရဖြစ်နေတာက အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လို့ မှတ်သားရဖူးတယ်။ အခုရောဂါလိုက ဘာလို့ကိုယ့်မှာလာဖြစ်ရသလဲသိဖို့လည်းခက်တယ်။ ကုရတာလည်းမလွယ်ပါ။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ကံတရားကောင်းအောင် နေ့စဉ် (အချိန်တိုင်းမှာ) ကြိုးစားနေကြဖို့ရာ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Related Items:Featured2, Female, PCOS, Polycystic ovarian syndrome